Yiziphi amaphakheji we-SEO amahle kakhulu ukuhlangabezana nezinjongo zebhizinisi lami ngokugcwele?
Masibhekane nakho - ngezinye izikhathi senze ukukhetha okulungile phakathi kwezihlinzeko ezihlukahlukene ezihlukahlukene zokuhlinzekela ukucinga ukuthi bonke babe "kuphela ama-package we-SEO ahamba phambili". "Kodwa ungayithola kanjani ngokulinganayo? Njengoba kungathatha isikhathi esiningi kakhulu, kusetshenziswe kuphela ukuphequlula ngokusebenzisa izinhlelo eziningi nezinkampani zokusebenza. Futhi kungaba umsebenzi onzima ngawe, kufanele ngivume, ngoba namuhla, cishe yonke ibhizinisi e-intanethi ibheka ikakhulukazi ngamathekisthi akhethekile kanye nokuzikhethela - ukuze kube konke okwenziwe ngephakethe elilodwa. Kodwa lapha kuza isihloko sezindaba ezinhle. Ngikunikeza uhlu olufushane lwezincomo ongazithola ziwusizo lapho wenza ukukhetha kwakho okuphelele phakathi kwamaphakheji we-SEO angcono kakhulu.
Ngokuvamile, siza kuzo zonke izinhlobo eziyinhloko zokunikezwa,. Ngokusobala, izixazululo eziyinhloko ngeke zisebenze njengamaphakheji angcono kakhulu we-SEO. Kodwa-ke, basakhipha ezinye izinzuzo ezifanele, okungenani ngaphakathi kohlelo lwabo lokusebenza okulinganiselwe. Okokuqala, izinhlinzeko ezejwayelekile ziyeza ngentengo ephansi, zimboze uhlu olulinganiselwe lwemisebenzi edingekayo yokusebenza, ekwazi ukukunikeza imiphumela yangempela ekusezingeni lokunyusa. Ngokuqondene nami, ngikholelwa ukuthi amadili ayisisekelo ayenakube ama-best deals, kodwa namanje asuka ekamelweni ukuze uthuthuke phambili. Uma ngabe usomabhizinisi osomabhizinisi we-intanethi, thola okokuqala ngecala lokuhlola futhi ube nesiqalo esihle ngokuqonda okuyisisekelo se-Search Engine Optimization.
Iqoqo elihle lezinsizakalo zokusesha okuvela kumhlinzeki othembekile, ngencazelo, kungenzeka ukuthi yiwona amaphakheji angcono kakhulu we-SEO. Yebo, ukushayela iwebhusayithi yakho ukusetha ukukhushulwa ngezinhlelo ezisezingeni elincane kunamanje kuncono kunokuthola ngaphandle kwanoma yini, akukho sidingo sokusho. Kodwa ngikholelwa ukuthi ukuhlelwa kwezinsizakalo ze-SEO zekhwalithi futhi kunganikezi izindlela ezenzelwe izinkambiso zesistimu yokuhlunga ngokusesha okufanelwe ngokuphelele kude nesinqumo esenziwe kahle. Yebo, isevisi eyenziwe ngezifiso izokubiza ngaphezulu, kodwa ithuthukise ukucubungula imigomo yakho yebhizinisi kanye nokulawulwa okuqondile yiqembu eligcwele lezimakethe zedijithali kuvame ukukhombisa ukubuyiselwa okumangalisayo kokutshalwa kwezimali (ROI).
Yebo, ngicabanga manje sekuyisikhathi esasihamba ngayo, njengoba zonke izinto zibhekwa kuwe ukuthi unqume ukuthi iyiphi indlela yokushayela injini yakho yokusesha injini nokuthi iyiphi umhlinzeki wenethiwekhi ukubhekana. Iseluleko kuphela engingakunika sona okwamanje ngukugcina iso lakho kulokho okuthola khona. Futhi umbuzo lapha awukho ngamathegi wamanani noma isikhathi esichithwa. Ukusebenza kahle kokusesha kungashesha ngokushesha yonke iphrojekthi yakho ku-intanethi ngokuchuma okuzinzile nokuhlala njalo. Enye indlela, ukuhweba kwakho kungase kuphonswe phansi ukuphazanyiswa okungakaze kubonwe amakhasimende akho. Yingakho ungalokothi unganqikaze ukwenza isifundo ngokujulile uphinde uhlole kabili amaphakheji angcono kakhulu we-SEO oyothola ibhizinisi lakho. Vele uphikelela lapho ubheka zonke izici kuzo zonke izici zokucwaninga kokusebenza ozibeka ngaphansi kokucubungula - kusukela ezinsizakalweni eziyinhloko njengokucwaninga ngegama elingukhiye, ukubhala kokuqukethwe kwekhwalithi, nokufakwa kuhlu lwemibhalo, kokunye ukugcinwa okubalulekile okusebenzayo kufana nokulandelela okufanele, i-analytics, ibhulogi ukuthumela, njll Source .